चार कोठे घरमा काठको झ्याल-ढोका राख्दा चौकोसमा कति खर्च लाग्छ? :: Setopati
समिक्षा अधिकारी काठमाडौं, चैत २
तस्बिर स्रोतः केरला होम डिजाइन्स
घर बनाउँदा प्रयोग गरिने सामग्रीले घरको स्वरूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसमध्ये झ्याल-ढोका प्रमुख हुन्। काठको तुलनामा आलुमिनियम र युपिभिसी झ्याल-ढोका सस्तो पर्छ।
महँगो भए पनि काठका झ्याल-ढोका चाहेजस्तो डिजाइन दिन, आकारप्रकार र गुणस्तर रोज्न, पुनः प्रयोग गर्न सकिने र टिकाउ हुनेजस्ता विशेषताले सदावहार छ।
चौकोस भन्नाले घरको भित्तासँग जोडिएको झ्याल वा ढोका अड्याइराख्ने फ्रेम हो। यो आवश्यकता अनुसार मोटो, पातलो, बलियो र कमसल काठबाट बनेको हुन्छ। त्यस्तै झ्यालमा सिसा अड्याउन (सेफ्टी फ्रेम) केही कमसल काठ राख्दा पनि खास फरक नपर्ने मल्लले जानकारी दिए।
झ्याल, ढोका र फर्निचरका लागि देशभित्रकै र विदेशबाट पनि गुणस्तरीय तथा केही सस्तो काठ काठमाडौं आउँछ।
'नेपाली सालको काठ सबभन्दा राम्रो र गुणस्तरीय मानिन्छ। यसबाट बनेका झ्याल-ढोका हत्तपत्त बिग्रिदैँन। कीरा-धमिरा लाग्दैन,' मल्लले भने, 'यसबाहेक बमेली थिया नामको काठ पनि चौकोसका लागि राम्रो मानिन्छ। महँगो पनि पर्छ।'
उनका अनुसार सालको काठ प्रतिक्युबिक फिट ५ हजार ५ सय रूपैयाँबाट सुरू हुन्छ। वर्षौं पुरानो साल भए अझ महँगो पर्छ। साज, सिसौ, पैंयु सस्ता काठ हुन्। झ्याल-ढोकाका लागि प्रतिक्युबिक फिट ३५ सयदेखि ५५ सयसम्मका काठ काठमाडौंका बजारमा पाइन्छ।
चीन, मलेसिया, इन्डोनेसिया, बर्माबाट पनि नेपालमा काठ भित्रिन्छ।
'ती तुलनात्मक सस्ता हुन्छन्,' मल्लले भने, 'नेपाली अग्राखको काठ महँगो र बलियो हुन्छ। प्रतिक्युबिक फिट ५५ सय देखि ७ हजारसम्म पर्छ।'
क्युरिङ नमको मेलेसियन काठ, नेपाली साज, सल्ला लगायत काठ झ्यालमा सिसा अड्याउन बीचबीचमा प्रयोग गरिन्छ।
यो पनि पढ्नुस्ः थोरै जग्गामा, कम खर्चमा बनाउन सकिने ४ प्रकारका घर (भिडिओ)
चार कोठे घरमा काठको झ्याल-ढोका बनाउँदा चौकोसमा कति खर्च हुन्छ?
मल्लका अनुसार सामान्यतया एक तलाको चार कोठे घरमा मूल ढोका, प्रत्येक कोठामा एक–एक वटा, ट्वाइलेट र पछाडि समेत गरी कम्तीमा सात वटा ढोका राख्नुपर्छ। त्यस्तै प्रति कोठा दुइटा र ट्वाइलेटमा एक गरि नौ वटा झ्याल आवश्यक छ।
पहिले ढोकाको चौकोसको कुरा गरौं।
सानो ढोकाका लागि १.२५ क्युबिक फिट र ठूलो ढोकाको चौकोसका लागि १.४२ क्युबिक फिट काठ आवश्यक पर्ने मल्लले जानकारी दिए। कोठाको ढोकाको चौकोस सामान्यतया १.४२ क्युबिक फिट काठ चाहिने आकारका हुन्छन्। पछाडि र ट्वाइलेटको ढोका अलि सानो भए पनि हुन्छ।
'चार फिट चौडाइ भएको ढोकाको चौकोसमा १.४२ क्युबिक फिट काठ लाग्छ। यो स्यान्डर्ड साइज हो,' मल्लले भने, 'अब यसमा सामान्य काठ प्रयोग गर्दा कम र सालको काठ प्रयोग गर्दा मूल्य बढी लाग्छ। रोजाइ ग्राहकको हुन्छ।'
माथिको मूल्य र आकारअनुसार एउटा ढोकाको चौकोसका लागि कम गुणस्तरको काठ रोज्दा ग्राहकले करिब पाँच हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्छ। त्यस्तै सालको चौकोस भए सात हजार आठ सय रूपैयाँ तिर्नुपर्छ।
यसैलाई आधार मान्दा चार कोठे घरका सात वटा ढोकामा ३५ हजारदेखि ५४ हजार रूपैयाँ बराबरको चौकोसमा लगानी गर्नुपर्छ।
'यो ढोकामा आवश्यक चौकोसको मात्रै तयारी मूल्य हो। पल्ला छुट्टै राख्नुपर्छ,' मल्लले भने।
यो पनि पढ्नुस्ः घरमा पार्केटिङ गर्ने हो? यस्तो छ फाइदा र मूल्य
अब झ्यालको चौकोसबारे जानौं।
मल्लका अनुसार झ्यालका लागि पनि नेपाली काठ राम्रो मानिन्छ। तर घरको बजेटअनुसार हिसाब गरेर आफूलाई उपयुक्त झ्याल–ढोका राख्न सकिन्छ।
सामान्यतया चार फिट लम्बाइ र छ फिट चौडाइ (४ बाइ ६) र साढे चार फिट लम्बाइ र छ फिट चौडाइ (४.५ बाइ ६) को झ्याललाई स्यान्डर्ड साइज मानिन्छ। एउटा झ्यालका लागि २.५ क्युबिक काठको चौकोस आवश्यक पर्छ।
एउटा झ्यालमा कमसल काठको चौकोस (पल्लाको बीचबीचमा राखिने फ्रेमसहित) राख्दा करिब ८ हजार ७ सय रूपैयाँ पर्छ। त्यस्तै सालको काठ राखे १३ हजार ७ सय रूपैयाँ पर्छ।
यसरी चार कोठे घरका नौ वटा झ्यालमा चौकोसका लागि (पल्लाको बीचबीचमा राखिने फ्रेमसहित) मात्र कम्तीमा ७८ हजार र बढीमा १ लाख २३ हजार रूपैयाँ लागत अनुमान गर्नुपर्छ।
माथिको तथ्यांकअनुसार चार कोठे घरमा झ्याल–ढोकामा प्रयोग हुने चौकोसका लागि काठअनुसार कम्तीमा १ लाख १५ हजारदेखि १ लाख ८० हजारसम्म लागत छुट्याउनु पर्छ।
यसबाहेक मूल ढोकामा प्रयोग हुने पल्ला अलि आकर्षक बनाउनेहरू हुन्छन्। मल्लका अनुसार बुट्टेदार ढोका बनाउने हो भने चौकोस पनि बेग्लै राख्नुपर्छ। यस्तो ढोका एउटैको दस हजारदेखि एक लाखसम्म पर्छ।
'मूलढोकाको आकार ठूलो हुन्छ। यहाँ प्रयोग हुने ढोका डिजाइनअनुसार पैसा पर्छ। यसमा काठ र मिहिनेत पनि धेरै लाग्छ,' उनले भने, 'किन्न आउनेले घरको नक्सा पनि ल्याउनुहुन्छ। नक्सा हेरेर के-कति काठ लाग्छ हामी गुणस्तर, परिमाण र मूल्यबारे जानकारी दिन्छौं।'
यी पनि पढ्नुस्ः घर बनाउँदा कुन सिमेन्ट प्रयोग गर्ने? के छ ओपिसी र पिपिसीको विशेषता
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत २, २०७७, १५:२२:००